Inona no ho hita ao Aranjuez | News Travel
Inona no hojerena ao Aranjuez
Mariela Carril | 14/04/2022 17:00 | Nohavaozina amin'ny 15/04/2022 15:50 | Tanànan'ny Espana, Inona no ho hita
Aranjuez Toerana fizahan-tany lehibe izy io raha mieritreritra ny hitsidika an'i Espaina ianao. tena akaikin’i Madrid, 47 kilometatra monja, azonao atao ny manatona akaiky kokoa ny mahafantatra ny harena ara-javakanto sy ara-kolontsaina ao aminy. Mipetraka eo amin’ny lohasaha izy io, eo amin’ny fihaonan’ny reniranon’i Jarama sy Tajo, voahodidina havoana sy lembalemba tsara tarehy.
Tena maitso i Aranjuez, nisy mponina an'arivony taona, na dia tamin'ny Moyen Âge sy ny Reconquest ihany aza no nanjary zava-dehibe kokoa, ary niafara tamin'ny toerana fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra ho an'ny mpanjaka. Andao hojerena inona no hojerena ao Aranjuez.
Tsy afaka ny tsy hanomboka amin'ny Royal Palace izay naorina teo amin'ny trano tranainyn'ny mpampianatra ny Didin'i Santiago. Nipoitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX tao amin'ny fanjakan'i León io lamina ara-pivavahana sy ara-tafika io, mba hiarovana ireo mpivahiny tao amin'ny Camino de Santiago sy handroaka ny silamo hiala ny saikinosy manontolo. Taty aoriana dia nopotehina, naverina tamin'ny laoniny ary nopotehina indray izy io, ary ankehitriny dia mbola velona amin'ny maha-fikambanana mendri-kaja sy ara-pivavahana azy.
Eny, ny Royal Palace Izany dia fomba Renaissance., miaraka amin'ny biriky sy vatosokay izay mahatonga azy ho bicolor, amin'izao fotoana izao dia zavatra mampiavaka ny tanàna iray manontolo. Nisy dingana maromaro ilay tetikasa ary ny voalohany dia teo ambany fitondran’i Felipe II, tamin’ny taonjato faha-XNUMX. Tatỳ aoriana, teo ambany fitarihan’i Felipe V, tamin’ny taonjato faha-XNUMX, dia notanterahina ireto dingana manaraka ireto. Ny Lapan'ny Mpanjaka sokafana ny talata ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva eo anelanelan'ny Oktobra sy Martsa ary manomboka amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 7 ora alina. eo anelanelan’ny Aprily sy Septambra.
Ny Royal Site koa dia manana zaridaina tsara tarehy samy hafa fomba. Ohatra, misy ny Zaridainan'ny Mpanjaka, miaraka amin'ny sary sokitra romanina maro, ny Island Garden, miaraka amin'ny loharano, ny Parterre Garden fomba frantsay ary Zaridainan'i Prince izay no lehibe indrindra amin'ny rehetra ary fomban'ny tontolo iainana, miaraka amin'ny loharano, nosy, dobo sinoa ary lapa kely mahafinaritra, ny Casa del Labrador. Misy koa ny Elizabeth II Garden, amin'ny fampiasana ampahibemaso mandrakizay.
Aranjuez koa dia manana velaran-tany midadasika miaraka amin'ny dian-tongotra, ala, zaridaina ary ahitra ary mbola hitanao ny zava-dehibe asa hydraulic engineering izay natao tamin’izany fotoana izany hahazoana ny rano hanondrahana ireo toerana rehetra ireo. Miresaka momba ny tatatra, lakandrano ary tohodrano fa ankoatry ny fanondrahana, tamin’io fotoana io ihany koa no namelany ny fampisehoana rano ho an’ny andriana, na koa mba hahafahan’ny Tagus afaka mandehandeha, manasivana ny rano ary manetsika ny fitotoana...
Ny rafitry ny diabe dia noeritreretina mialoha, ka natao koa izy ireo kianja, rond point ary arabe. Ny baiko voalohany dia tao amin'ny faritr'i Pico Tajo ary taty aoriana nanaraka ny renirano, na dia teo amin'ny morontsiraka avaratra aza dia tsy dia nisy tanan'olombelona tafiditra ary mbola hita ankehitriny ny zavamaniry mahazatra.
La Saint Anthony Square hatsaran-tarehy tamin'ny tapaky ny taonjato fahavalo ambin'ny folo izy io ary naorina mba hampifandray ny tranoben'ny lapa amin'ny villa vaovao. Harena sarobidy ny trano manodidina: ohatra, ny Fiangonan'i san antonio amin'ny fe-potoana mitovy, ny Tranon'ny Knights sy Trades tamin’ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, izay nipetrahan’ny lehilahy tao amin’ny fitsarana, ny Tranon-jaza na koa ny Zaridainan'i Isabel II izay nomentsika teo aloha. ny Loharano Mariblanca mipetaka amin'ny tendrony iray koa izy.
Mazava ho azy koa misy trano maromaro natokana ho an’ny andriana. Nasaina nanorina ny satroboninahitra trano fonenana ho an'ny tandapany sy ny mpiasany, fa misy koa ny trano naorin’ny manam-pahaizana sy ny mpivarotra. Toerana fialan-tsasatra ho an'ny mpanjaka, dia niaraka tamin'ny lapany ireo mpanjaka, ka voatery nampiantrano ireo olona anisan'ny manodidina. Ohatra, misy ny Lapan'i Godoy, Lapan'ny Duke of Osuna, Lapan'i Medinaceli, Lapan'ny Duke of Acos na Lapa Silvela.
Ho an'ireo trano mendri-kaja dia ampiana ny trano sivily amin'ireo farany dia azontsika atao ny manonona ny Tranon'ny Governora, Tranon'i Diego Agudo de Cevallos, Parador del Rey na Tranon'i staff. Ankoatr'izay dia misy trano ho an'ny mponina amin'ny ankapobeny toy ny Hopitaly San Carlos, Plaza de Toros, Mercado de Abastos, la Garan-dalamby naorina efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX na ny Carlos III Royal Theatre.
Amin'ireo trano hajaina sy sivily ireo dia ampiana ny trano fivavahana toy ny Fiangonan'i Alpajés, ny an'i San Antonio, ny Convent of San Pascual. Farany, nieritreritra momba ny famatsiana ny mponina ao Aranjuez, nandritra ny fitondran'i Carlos III, dia nanomboka ny fitrandrahana ny fambolena: misy tanimboaloboka, hazo oliva, voa, hazo fihinam-boa ary ny fanorenana rehetra ilaina amin'ny fampiasana, fikojakojana ary fampandehanana.
Ny kanto Garage an'ny reny mpanjakavavy Izy ireo dia naorina tamin'ny taonjato faha-1985 ary eo akaikin'ny Plaza de Abastos. Izy io no nipetrahan'ny tranon'omby, efitrano ary garazy an'i Bárbara de Braganza, vadin'ny Mpanjaka Ferdinand VI. Nodoran'izy ireo teo ambany fitondran'i Napoléon izy ireo ary naverina tamin'ny laoniny mandra-pahatongan'ny XNUMX dia nahita ny toerana halehany: Isabel de Farnese Cultural Center misy arsiva, sekoly mozika ary tranomboky.
El Carlos III Royal Theatre Efa tamin’ny taonjato faha-1989 izy io, teatra sy sinema ary nikatona tamin’ny 2014, ary nisokatra indray tamin’ny XNUMX. Afaka tonga hijery azy ianao. Manana tranombakoka ve i Aranjuez? Eny tokoa, misy ny Tranombakoka miady omby ao anatin'ny tobin'omby, ary ny Royal Barge Museum, ao anatin'ny Jardín del Príncipe, eo akaikin'ny pier. eto no ho hitanao sambo tena fahafinaretana harena izy ireo. Zavatra toy ny gondola: tsara tarehy, voaravaka, voadio, misy sary hosodoko sy sary hosodoko.
eto ny sambo tranainy indrindra sy kanto indrindra dia ny an’i Carlos II, tamin’ny taonjato faha-XNUMX, tsara volamena sy tena izy. Eo koa ny sambon’i Carlos IV, nanomboka tamin’ny taonjato faha-XNUMX, naorina tao Cartagena ary nisy akanjo fiarovan-tenan’ny mpanjaka teo am-bodin’izy ireo. Ny tranombakoka misokatra ny talata hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 6 ora hariva ary ny tapakila dia vidiana ao amin'ny biraon'ny tapakila ao amin'ny Royal Palace ho an'ny 9 euros. Raha mandeha alarobia na alahady manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ianao dia tsy mandoa ny fidirana, toy izany koa ny 18 sy 12 mey.
Araka ny voalazanay tany am-boalohany Aranjuez dia tena akaiky an'i Madrid ka afaka mandeha irery ianao. Mazava ho azy fa afaka misoratra anarana amin'ny a fitsidihana tarihina izay maharitra adiny roa sy safidy hafa somary lava kokoa, maharitra adiny roa sy sasany. Ary ny safidy fahatelo tena tsara dia ny mandeha sambo amin'ny Tagus.
Farany, mankalaza fety izay azonao ankafizina ihany koa i Aranjuez: amin'ny volana Mey ny Foara asa tanana, ny Fetiben'ny Mozika Aranjuez Folk, ny foara fiara efa niasa sy semi-vaovao, ny Andron'i Saint Isidrp Labrador, ny Andron'i San Fernando, ny olo-masina mpiaro ny tanàna sy ny Fetiben'ny mozika tany am-boalohany. Eo koa ny Foara Boky, ny Fetin'ny fikomiana, karnavaly, herinandro masina...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Inona no hojerena ao Aranjuez
Ny katedraly lehibe indrindra eran-tany